I-China imibala emibini eguqukayo ekhokelayo ekhokelela ekukhanyeni kunye nabenzi be-3m yokubambelela ngasemva kunye nabathengisi | Huayuemei
Umbala ophindwe kabini okhanyayo okhanyise ukukhanya kunye ne-3m ngasemva
Ukucaciswa I-350 * 6.7 * 0.2mm
I-LED yangaphakathi 60PCS
CRI 90+, Ngaba ngemfuneko
Ukutshintsha kombala 2700-3200k & 6000-6500K, ngentando yakho
Amandla 9.6w / iiPC
Ibhodi ye-1.Adpot FR4, enomgangatho ophezulu. Ukuxhathisa okungcono komgangatho ukukhusela umtya okhokelwayo.
Ibhodi ekhokelwayo eguqukayo inokutshintsha uhlobo olwahlukileyo, ilungele ibhokisi encinci yokukhanya, ibhokisi ekhethekileyo yokukhanya.
Ukusetyenziswa kwe-Chip ye-EPISTAR. Okanye ungakhetha ezinye chip kwakhokelela, sinako ngokwesicelo sakho ukuba wena.
Ukungeniswa kwezibonelelo zemveliso okanye ukusebenza kwesicelo okanye indlela yesicelo
Ubushushu obunokwenzeka ngokwesicelo sakho esenziwe ngokwezifiso, esiqhelekileyo sinokufudumala okumhlophe, esimhlophe, esimhlophe esimhlophe njalo njalo. Ubushushu obunemibala eyahlukileyo bubonisa iziphumo ezahlukeneyo zokukhanya. Kuxhomekeka kwintoni
ukukhanya ofuna ukukukhetha.
Olu hlobo lwe-ogf olukhokelwe ngumtya lunokunqunyulwa nguwe, umtya owahlukileyo unobungakanani obahlukeneyo bokukha,
4.Indlela yokudibanisa umtya
Icandelo ngalinye le-LED kufuneka liqhagamshelwe kunikezelo lwamandla e-DC, okanye elinye icandelo le-LED eliqhagamshelwe kunikezelo lwamandla e-DC (ikhonkco elinamandla). Indlela yoqhagamshelo iya kuxhomekeka kuhlobo lweengcingo okanye iiplagi ezibonelelwe nge-strip ye-LED, nokuba ingaba unikezelo lwamandla lweDC lubandakanya iplagi na. Ukuba uqhelekile kwaye ukhululekile nge-soldering, amaxesha ngamaxesha oku kunokubonelela ngesisombululo esineendleko kunye nesisombululo. Andiqinisekanga ukuba uza kwenza njani okanye awufuni ukujongana ne-solder? Unokusebenzisa izixhobo zokunxibelelana ezingenakuthengiswa ukudibanisa amacandelo e-LED kumbane wamandla kunye namanye amacandelo e-LED.
Imveliso 5.Our une UL, CE, RoHs certification.
Egqithileyo I-2835 50cm36led (imo)
Okulandelayo: I-3m yokuncamathela kukhokele umtya wokukhanya kwe-strip smd5050 ukukhanya okuphezulu
Umtya oguqukayo okhokelwa kwibhokisi yokukhanya engaqhelekanga